कृषि प्रधान देशमा कृषककाे बेहाल, एक बोरा मलका लागि गाउँ–शहर भौतारिँदै !
संजय तिवारी शुक्रबार, पुस २, २०७८
दुईदिन अगाडी प्रदेश २ को सप्तरीमा कृषि विश्वविधालय उदघाटन गरी फर्किन लागेका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीलाई स्थानिय किशान दुसन्त यादवले अचानक उनको हांथ समातेर १ बोरा मल उपलब्ध गराईदिन हारगुहार गरे ।
मुख्यमन्त्री गद्दीले हुन्छ हुन्छ भन्दै गाडी चढे । पछी कृषक यादवले मलखाद्द अभावका कारण आफुहरुको किशानी बर्बाद हुनलागेको सञ्चारकर्मिहरुलाई जनाए ।
नेपालको अन्नभण्डारको भनिने तराई–मधेशको जिल्लाहरुमा अहिले किशानहरु कृषक यादव जस्तै मलखाद्दको अभावमा समस्याग्रस्त छन् ।
अहिलेको बेला मुख्यरुपमा गहुंबाली लगाउने सिजन छ । सिजनकै बेला मल तथा खाद्दको जोहो नहुंदा आफ्नो पेशा नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले किशानहरुलाई पिरोलेको छ ।
कृषि पेशाबाट बहुसंख्यक नागरिकको रोजिरोटी चल्ने देशमा कृषको हालत नै बेहाल भएको अवस्थामा यसको समाधानको बाटो कतै देखिदैन ।
हरेक वर्ष किशानी गर्ने बेलामै देशमा मलखमद्दको अभाव हुनेगरेको छ । सरकारले कृषकहरुको शुविधाको लागी कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय त बानाएको छ तर मन्त्रालयले सहज रुपमा मलखाद्दको व्यवस्था गर्नसकेको देखिदैन ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले समयमै माग बमोजिम मलखाद्द उपलब्ध गराउन सक्दैन ।
यता भारतिय सिमा क्षेत्रमा रहेका किशानहरुले पारिबाट एक–दुई बोरा मल ल्याउंदा सिमामा रहेका ससस्त्र प्रहरीले समातेर भन्सारलाई बुझाउंछ ।
यसरी चारैतिरबाट बिक्षिप्त भएका किशान हरेश खाएर बसोका छन् । कहिंकतै स्थानिय निकायले मलखाद्द आफै खरिद गरेर बाड्ने निति बनाएपनी त्यसमा पनि आफ्ना नजदिकिलाई मात्रै बाड्ने गरेका कारण गरिब किशान झनै समस्यामा परेका छन ।
बुधवारमात्रै धनुषाको एक पालिकामा लुकाएर राखिएको मल कृषकहरुले लसटिलिएको समाचार बाहिर आएको छ ।
किन भयो मलखाद्दको अभाव ??
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले मल किन्न आवश्यक बजेट नभएको भन्दै पंछिईरहेको छ ।
कृषि मन्त्रालयका कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाका कृषि प्रचार अधिकत अरुण जीसीका अनुसार अन्तरराट्रिय बजारमा मलको अभावका कारण मुल्यवृद्धी भएकोले सरकारले छुट्याएको बजेट अपुग भएको बताएका छन् ।
उनले कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसंग मलखाद्द खरिदका लागी १३ अर्ब २० करोड रुपैया माग गरेकोमा अर्थमन्त्रालउ जम्मा ९६ करोड रुपया पठाएका कारण मलखाद्दको सहज आपुर्ति गर्न नसकिएको बताए ।
#कृषि #मलखाद्द_अभाव #किशान
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस २, २०७८ १२:११